कोरोनाबाट बच्न जीवनशैलीमा परिवर्तन – Nepal Japan
कोरोनाबाट बच्न जीवनशैलीमा परिवर्तन
पूर्वीय दर्शनमा आधारित भान्सा पद्धतिलाई पुनःस्थापित गरिनुपर्नेमा जोड
नेपाल जापान ४ जेष्ठ १८:१२
कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट बच्न पूर्वीय दर्शनमा आधारित जीवनशैलीलाई अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वाग्मती सफाइ महाअभियानको हामी साथ छौँ कार्यक्रमले मंगलबार ​जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको ‘के गर्ने ? के नगर्ने ?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयुर्वेदका वरिष्ठ चिकित्सक डा ऋषिराम कोइरालाले पूर्वीय दर्शनमा आधारित भान्सा पद्धतिलाई पुनःस्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वाग्मती सफाइ अभियानकर्मी नारायण श्रेष्ठले साप्ताहिक रुपमा ‘के गर्ने ? के नगर्ने ?’ भन्ने विषयमा विज्ञबाट अन्तरक्रिया गरिने बताउनुभयो । वाग्मती सफाइ महाअभियान आठ वर्ष पूरा भई नवौँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा बुधबार जुम प्रविधिबाटै विशेष कार्यक्रम गरिने जानकारी पनि सो अवसरमा गराइएको थियो ।